सिल्टल: उपकरण क्रलर वा स्क्रैपर्स इकमर्स वेबसाइटहरू बाट डेटा प्राप्त गर्न
ई-वाणिज्यबाट डेटा हान्न विभिन्न प्रविधिहरू र तरिकाहरू विकसित गरिएका छन्।
वेबसाइटहरू, अनलाइन स्टोरहरू, सोशल मिडिया वेबसाइटहरू वा अन्य समान पोर्टलहरू. कहिलेकाहीँ तपाईले ई-वाणिज्य साइट जस्तै अमेजन र ईबे मैन्युअल रूपमा डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर यस्तो डेटा गलत र अज्ञात हुन सक्छ।. यस प्रकार, तपाईंलाई सधैँ DIY निकालेर वा स्क्रैपर्स प्रयोग गर्न डेटा निकाल्न, यसको गुणस्तर अनुगमन र रखरखाव गर्न आवश्यक छ.
ट्याबुला सबै भन्दा शक्तिशाली र उत्कृष्ट DIY स्क्रैपर्स हुन्।. यसले तपाईंको PDF फाइलहरू स्क्रैप गर्न सक्छ र ई-वाणिज्य वेबसाइटहरूको लागि राम्रो छ. तपाईले केवल डेटा हाइलाइट गर्न र ट्याबला यो तपाईंको लागि स्क्रैप गर्न दिनुहोस्. यसले तपाईंको आवश्यकताहरु र अपेक्षाहरु अनुसार सही डाटा दिने प्रतिज्ञा गर्दछ. एकपटक स्थापना र सक्रिय भएपछि, ट्याबलाले अमेजन र eBay दुवै कुनै पनि समस्या बिना डेटा निकाल्नेछ.
यो केवल वेब क्रलर छैन तर यो एक व्यापक र उपयोगी डेटा निकासी कार्यक्रम. यो उपकरण उपकरणले तपाईंलाई व्यवस्थित र well-versed रूपमा डेटा एकत्र गर्न दिन्छ. तपाईं यसको गुणवत्ताको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन किनकि ओपनरेफाइनले उच्च स्तरको डाटा निकासी सुविधा प्रदान गर्नेछ.
स्क्रापरविकि एक उपयोगी DIY क्रलर हो र स्क्रैररले मद्दत गर्दछ जुन सबै प्रमुख ई - वाणिज्य वेबसाइटहरु बाट डेटा निकाल्न मद्दत गर्दछ।. यसले प्रोग्रामरहरू र विकासकर्तालाई अनलाइन जानकारी प्रयोग गर्न र वैध डाटासेटमा यसलाई घुमाउन प्रोत्साहन दिन्छ. Scraperwiki तपाईंलाई कुनै पनि प्रोग्रामिंग भाषा जस्तै पाइथन, पीएचपी, र रूबी जान्न आवश्यक छैन.
स्क्रैप. यो अझै अर्को अद्भुत DIY उपकरण हो जसले चीजहरू प्राप्त गर्न सरल बिन्दु र क्लिक विकल्प प्रयोग गर्दछ. तपाईं सजिलै संग आफ्नो मनपर्ने ई-वाणिज्य साइटहरू, जटिल वेब पृष्ठहरू, र मल्टीमीडिया फाइलहरू स्क्रैप प्रयोग गरेर डेटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो. यो प्रोग्राम यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेसको लागि उत्तम छ र स्वचालित रूपमा तपाईंको लागि कच्चा डाटा फिक्स गर्दछ. यो स्टार्टअप र इन्टरप्राइजहरूका लागि एकदम सही छ जसले अमेजनको डाटा आफ्नो व्यवसायको लागि निकाल्न खोज्छ. यसले तपाईंलाई आधुनिक HTML5 र वेब2बाट छवि र पाठ दुवै निकाल्न दिन्छ.0साइटहरू जो AJAX र जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ.
इन्टरनेटमा DIY क्रलरहरू र डेटा स्क्रैपर्सहरू छन्, तर सेन्टैंन्टिक्स3एक अपेक्षाकृत नयाँ कार्यक्रम हो।. यदि तपाईं गुणवत्तामा सम्झौता नगरी विभिन्न अमेजन वा ईबे उत्पादहरूको जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो उपकरण प्रयोग गर्नुपर्दछ. डाउनलोड र स्थापना गर्दा धेरै समय लाग्ने छैन. सिमेन्टिक्स3ले केवल केही महिनामा लोकप्रियता प्राप्त गर्यो, र यसको डेटाबेस सर्वोत्तम र सबैभन्दा विश्वसनीय हो. यसले तस्बिरहरू, मूल्यहरू, उत्पादन विवरणहरू र तपाईंको खुदरा विक्रेताहरू जस्तै Walmart, eBay, र Amazon बाट अन्य जानकारी बचत गर्दछ. यसबाहेक, यस उपकरणले प्रयोगकर्ताहरूको लागि वास्तविक समय खोज्छ र तिनीहरूको अपेक्षाहरू उठाउँदछ.
एघिसन ई-वाणिज्य र भ्रमणका वेबसाइटहरूको लागि एक क्लाउड-होस्ट गरिएको स्क्रैपिंग अनुप्रयोग राम्रो छ।. यो सेटअप गर्न सजिलो छ र Google क्रोमको साथ एकीकृत हुन सक्छ. ईबे र अमेजन जस्तै वेबसाइटहरू यो व्यापक DIY प्रोग्राम प्रयोग गरेर मिनेटमा भित्र निकाल्न सकिन्छ. तपाईं उत्पाद विवरणहरू, स्टक जानकारी र मूल्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ Source .